Qiimeynta Caafimaadka - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Maaraynta Caafimaadka > Qiimaynta Caafimaadka
Baro waxa qiimeynta caafimaad ay tahay iyo sida ay kaaga caawin karto inaad gaarto yoolalkaaga caafimaad.
Qiimeynta caafimaadka waa baaritaan gaaban oo lagu weydiinayo caafimaadkaaga iyo noloshaada. Waxay naga caawinaysaa inaan helno barnaamijyo iyo adeegyo kaa caawin kara inaad dareento sida ugu fiican. Waan kula wadaagi doonnaa macluumaadka iyo fikradaha kadib markaad dhammaystirto sahankaaga.
Macluumaadkaaga qiimeynta caafimaadka waa qarsoodi.
Sidee ayey u shaqeeyaan qiimeynta caafimaad?
Qiimeynta caafimaadka badanaa waxaa kujira su'aalaha mowduucyadan:
Da'da, jinsiga, iyo jinsiyadda.
Hab nololeedka oo ay ku jiraan jimicsiga, cuntada iyo haddii aad isticmaasho tubaakada ama aalkolada.
Caafimaadka shucuurta. Xaaladaha sida niyadjabka iyo walwalka waxay saameyn ku yeelan karaan caafimaadkaaga shucuureed, sida dhacdooyinka nolosha iyo walbahaarka kale.
Caafimaadka jirka. Tan waxaa ka mid ah miisaanka, cadaadiska dhiigga, heerarka kalastarolka, uurka, iyo arrimo kale.
Xaaladaha caafimaad ee hadda iyo kuwii hore.
Kheyraadka iyo baahiyaha taageerada. Tan waxaa ka mid ah cuntada, guryaha, gaadiidka, iyo taageerada shaqada.
Goorma ayaan qaadaa Qiimaynta Caafimaadka?
Markaad xubin ka noqoto CHPW xubin ahaan, waan kula soo xiriiri doonnaa si aan kuugu soo bandhigno qiimeyn caafimaad 90 maalmood gudahood. Waxaa lagaa codsan doonaa inaad qaadato qiimeyn caafimaad sanad kasta oo aad xubin ka tahay. Waxaan u adeegsanaa qiimeynta caafimaadka si aan uga caawinno xubnaha inay sameystaan ​​qorshooyin daryeel oo aan ku siino fikrado shaqsiyeed si ay kaaga caawiyaan inaad dareento sida ugu fiican
Sideen u qaataa Qiimeynta Caafimaadka?
Waxaad sahanka ku qaadan kartaa taleefoon, boostada, ama internetka. Haddii aad dhawaanahan ku yeelatay caafimaadkaaga ama aad rabto inaad dhammaystirto qiimaynta caafimaadka maanta fadlan gal Xarunta Xubinta.